Izindawo ze-Casino zase-Bulgarian Online - Amakhodi we-Casino e-Inthanethi
(534 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Amasayithi ekhasino aku-inthanethi aqhuba abadlali abavela eBulgaria
Bheka uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBulgaria futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile eku-inthanethi. Lapha uzothola ukuzijabulisa okuhlukahlukene kusuka kumishini yama-slot ukuze uphile imidlalo yasekhasino evela kubathengisi be-software abadumile njenge-NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming nabanye abaningi.
Ungabuyekeza ukubuyekezwa kwe-website yethu ye-casino ukuze uhlale usesikhathini ngokukhushulwa okuhle kakhulu kwe-intanethi, amabhonasi nezindlela zokukhokha ezitholakalayo kubadlali baseBulgaria.
IBulgaria iheha izivakashi hhayi kuphela ngamabhishi anesihlabathi, kepha futhi nezinhlobonhlobo zokuzijabulisa okwahlukahlukene. Okujabulisa kakhulu izivakashi nezakhamuzi zendawo, ukugembula eBulgaria kusemthethweni. Qaphela izivakashi ezikhathalogi yethu eku-inthanethi yokugembula ukuthi amakhasino amakhulu kunawo onke asenhlokodolobha yaseSofia, nasezindaweni ezithandwayo zokuvakasha. Igunya eligunyaziwe lokulawula ukugembula ezweni yiKhomishini Yezokugembula Kahulumeni, eyakhiwe nguMnyango Wezezimali waseBulgaria. Idokhumenti esemthethweni egunyaza ukugembula ezweni nguMthetho omusha wezokugembula eBulgaria, owaqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 2017.
Ukugembula ku-inthanethi eBulgaria
Ukugembula ku-inthanethi eBulgaria kusemthethweni. Abasebenza kwamanye amazwe badinga ukuthola ilayisense yokwenza imisebenzi yokugembula endaweni yezwe. Kusukela ngoJanuwari 2017, kunezindawo eziningi zokugembula eziku-inthanethi eBulgaria - kusuka kumakhasino aku-inthanethi kuya kubabhuki abaku-inthanethi. Imikhiqizo edume kakhulu yiPokerstars, bet365, bwin kanye ne-betfair.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 zesiBulgaria ku-Casino Sites
IBulgaria izwe eliheha izivakashi ngeholide elihle oLwandle Olumnyama, izindawo zokungcebeleka zokushushuluza namakhasino amahle. Ukuhlanganiswa kwensizakalo enhle kakhulu kanye namanani entando yeningi enza leli lizwe libe yinto yokunakwa okwengeziwe kwabavakashi abavela kuwo wonke umhlaba. Umsebenzi weCasinoToplists ukuthola ukuthi izinto zinjani ngokugembula namakhasino aku-inthanethi eBulgaria okwamanje.
Ukugembula nemithetho esuka ku-1979 kuya ku-2017;
Amakhasino aku-inthanethi opharetha bamazwe aphesheya kumele abe nelayisense laseBulgaria. Okunye kuvinjiwe;
Uma i-opharetha yamazwe omhlaba ingavinjelwe, ungadlala. Kepha ngengozi yakho (ingavinjelwa);
I-casino yasemhlabeni njengomthetho kumahhotela 4-5 izinkanyezi, kusukela ku-passport engu-18 ubudala +;
Ngabe ufuna ukudlala amakhasino aku-inthanethi? Sizokutshela ukuthi ungakwenza kanjani lokhu - imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo;
IBulgaria: i-geography nomlando, izindawo ezithakazelisayo eSofia, amaqiniso athakazelisayo ngezwe nabakhileyo kulo.
Imithetho yaseBulgaria ngokugembula - ireferensi yomlando
1979 Ukuvulwa kwekhasino yokuqala eSofia hotel “Vitosha”
1999 "Umthetho weKhazart" umthetho olawula ukugembula ezweni. Ukukhishwa kwamalayisense yiKhomishini Yombuso Yezokugembula. Ngokuyinhloko, abatshalizimali bendawo banelungelo lokuvula ikhasino. Ukuthola ilayisense yezinkampani zakwamanye amazwe kudingeka uthenge ihhotela okungenani u-4 *.
2000 Ama-casino opharetha ase-Inthanethi kumele athole ilayisensi evela kuKhomishane kaHulumeni yokuGembula (SCG).
Ngokusemthethweni, kuphela lezo casino ezinikezwe ilayisensi eBulgaria zivunyelwe.
Amanye amakhasino angaphandle avinjelwe ikheli le-IP kanye nalabo abanemvume e-European Union (okuyinto, empeleni, ephikisana nemithetho ye-European Union ngokuhweba kwamahhala).
Ngokuya ngemithetho yombuso, opharetha kufanele "ngokomzimba" abekhona endaweni yezwe, abe nesizinda esehlukile futhi akhokhe intela evuna izwe.
Uma isayithi elisendaweni yaseBulgaria lingavinjelwe - khona-ke liyatholakala kumdlalo.
Amakhasino omhlaba "angaxhunyiwe ku-inthanethi" eBulgaria
Amakhasino asezindaweni zasemhlabeni ngokuvamile akhona kumahhotela anezinkanyezi ze-4-5 nasezindaweni ezikhethekile zokuhlala
I-Casino iyadingeka ukuthola ilayisense evela eBulgaria
Izimo ezibophezelekile zokufinyelela ekhasino eBulgaria: iminyaka kusuka eminyakeni eyi-18, ukutholakala komazisi. Ngeke ukwazi ukudlala uma uphuzile noma udakiwe, uze ngomfaniswano futhi uyisisebenzi sikahulumeni noma unokuxhumana nebhizinisi lokugembula (ngisho nezihlobo zabanikazi bekhasino kanye nabasebenzi abavunyelwe ukudlala).
Amakhasino aku-inthanethi eBulgaria - Ungaqala kanjani ukudlala amakhasino aku-inthanethi?
Sinqume ukudala imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi ungaqala kanjani ukudlala ekhasino eliku-inthanethi. Njengomthetho, wonke amakhasino angaphandle asebenzisa isiNgisi samazwe omhlaba, ngakho-ke okungenani ulwazi oluncane ozoludinga.
Hlola ukuthi le casino ingokomthetho yini ensimini yeBulgaria. Uma ikhasino lingavinjelwe endaweni yaseBulgaria ngekheli le-IP, liyatholakala ukuze lidlalwe. Kwesinye isikhathi amakhasino awamukeli abadlali abavela eBulgaria, kungcono ukuthi ufunde ngakho ekhasino ethile esevisi yokwesekwa. Insizakalo enjalo ikuwo wonke amakhasino aku-inthanethi ahloniphekile.
Hlola ikhasino ngokuthembeka. Lokhu kufanelekile ukuqinisekisa ukuthi:
Ukuba khona kwelayisensi yomhlaba wonke yekhasino (imininingwane iyatholakala kuwebhusayithi yekhasino esizindeni somphakathi);
Ulwazi lwekhasino okungenani iminyaka engu-3;
Impendulo emihle evela kubadlali kwinethiwekhi;
Isoftware yekhasino imelwe ngabathuthukisi abakhulu bemidlalo eku-inthanethi (i-NetEnt, Playtech, Microgaming, njll.).
Khetha indlela yokukhokha - ikhasino inikeza ukukhetha izinketho eziningi zokukhokha (i-VISA, i-PAYPAL, i-WebMoney, i-Skrill, i-Yandex noma abanye) futhi unelungelo lokukhetha okulungele wena. Ngaphezu kwalokho, chaza imithetho yokufaka nokukhipha izimali (kwesinye isikhathi kukhokhelwa okukhulu kukhokhwa ngezingxenye nangesikhathi esithile). Ungakhohlwa ngokuguqulwa kwezimali kanye nekhomishini yabasebenza ukukhipha imali.
Funda ngemibandela yomsebenzi ekhasino:
Amagama ebhonasi (i-wager) nezinhlelo zokuthembeka kwamakhasimende
Imigomo yokuvulwa kwe-akhawunti (amanye amakhasino adinga ubufakazi bokuthi ungubani - kwesokudla.
Funda ngokucophelela izimo zekhasino:
imigomo yamabhonasi nama-wagers,
imibandela yokubhalisa (ngezinye izikhathi ukuskena kwepasipoti kuyadingeka ukuqinisekisa i-akhawunti);
kungakhathaliseki ukuthi udinga ukulanda isofthiwe bese uyifaka kukhompyutha yakho noma ungadlala kusiphequluli
izidingo zezimfanelo zobuchwepheshe (ngokudlala ku-intanethi nomdayisi ophilayo)
Uhlobo luni lokuqinisekisa okuhlinzekwa yikhasino? Ukubethela idatha ye-SSL, uhlelo lomdlalo olubhekelekayo, njll.
Ukuzikhethela komuntu siqu nezintandokazi zakho
Ingabe le casino e-intanethi inikeza imidlalo enesithakazelo kuwe?
Uyakuthanda ukwakheka kwekhasino? Ngabe konke kunembile?
Ngemuva kokujwayelana nawo wonke amaphuzu angenhla, ungaya kumdlalo. ICasinoTopLists iphinde ikucebise ukuthi ufunde imininingwane ngemithetho yemidlalo, amasu namasu. Ngakho-ke ungafunda ngokushesha emdlalweni, futhi imali oyibhalile izobe ilawulwa kangcono.
Indawo yeBulgaria kanye nesizinda somlando omfushane
Izwe lisogwini loLwandle Olumnyama futhi linqamula namazwe anjengeGreece, Turkey, Serbia, Romania neMakedoniya. Ngokokuqala ngqá ngamaBulgaria kukhulunywa ngawo ngonyaka we-354. Kusukela ngaleso sikhathi, umlando waleli zwe usunezinto eziningi: kwaba ukunqotshwa koMbuso Wase-Ottoman ngasekupheleni kwekhulu le-14, ukubamba iqhaza empini neSerbia phakathi neMpi Yezwe Yokuqala, kanye nokubamba iqhaza eMpini Yezwe II ohlangothini lwe EJalimane. IBulgaria yanamuhla yakhiwa ngo-1989 futhi yaba yi-republic republic. Manje izwe selihlukaniswe izifunda ezingama-28 nenhlokodolobha esedolobheni laseSofia.
IBulgaria ebalazweni laseYurophu
Alexander Nevsky Cathedral . Ikheli: Aleksandar Nevski 1 1000. Yakhiwa ngo-1912 futhi ivelele phakathi kwamanye amasonto nezindela ngobukhulu bayo. Amandla - abantu abangu-5,000 XNUMX.
Imidwebo yomlando kazwelonke . Ikheli: Vitoshko Lale Street 16, 1618. Lapha kuqoqwa izinto zobuciko zomlando kusukela ezikhathini zasendulo kakhulu kuze kube sezinsukwini zethu.
Igalari Yesizwe Yesizwe . Ikheli: пл. “INkosana u-Alexandre I” №1. Abathandi bezobuciko bazoba nentshisekelo yokuvakashela umbukiso wemidwebo engu-50,000 XNUMX yamakhosi adumile avela emhlabeni wonke. Futhi, kukhona imibukiso yobuciko besimanje namakilasi aphezulu.
I-City Zoo . Ikheli: Ukungena okuphakathi kutholakala eSimeonovsko Shosse boulevard. "Ukungena kweNtshonalanga kusuka kumgwaqo uSrebarna 1. Ensimini yamahektha angama-250 uzohlangana nezilwane nezinyoni eziningi ezingaphandle kakhulu.
St. Sophia Cathedral . Ikheli: IParis street 2. Leli yiCathhedral, elakhiwa ngekhulu lesi-6, elinikeze inhlokodolobha yaseBulgaria leli gama.
Amaqiniso anentshisekelo ngeBulgaria namaBulgaria
I-Sofia yidolobha elidala kunabo bonke eYurophu;
IBulgaria iyizwe lokuqala lamaSilavic, elase-865 elawula ubuKristu;
Ama-alfabhethi eBulgaria angamaCyrillic, afana kakhulu nesiRussia, izinhlamvu E, E no-N azikho kuwo, kodwa kukhona incwadi b, futhi lokhu akuyona uphawu oluqinile;
Ama-80-85% ewayini lomhlaba athunyelwa eBulgaria;
Izakhamuzi zendawo zikhokhela ku-40% njengezintela;
Amakhekhe owathandayo - i-banichka noma i-banitza (ukubhaka ishidi ngokugcwaliswa okuhlukile kusuka ku-brynza kuya kusipinashi). Ushizi we-kottage awunjalo;
I-Kiselo mlyako - i-kefir kazwelonke - ayinazo iziqu emhlabeni, njengoba ikhiqizwa ngokungezwa kohlobo olukhethekile lwama-bacteria. EJapan kudingeka kakhulu futhi kubhekwa "njengesihlava sokuphila isikhathi eside";
Abantu baseBulgaria abagcini isikhathi ikakhulukazi futhi ukubambezeleka kuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, laba bantu babonakala ngekhwalithi engathandeki njengomona. Omakhelwane bathanda kakhulu ukuxoxisana;
I-Bagpipe iyisitsha sikazwelonke;
Emadolobheni asebenzela ezindaweni zokungcebeleka kuvame ukuba nemenyu yendawo nabangaphandle. Ngokwemvelo, umehluko wamanani uyabonakala;
"Yebo" unqekuzisa ikhanda eRussia asho ukuthi "cha" eBulgaria, futhi okuphambene nalokho. Qaphela!
Mayelana namakhasino aseBulgaria
Ingxenye enkulu yokuphumula kwami ​​yayisedolobheni elincane elibizwa ngokuthi iBansko. Ngaphezu kosayizi onesizotha, futhi kuyaphawuleka ngamanani asezingeni elifanele, imvelo enhle kanye nomuzwa oqhubekayo wokungakhululeki okuncane. Inani lezivakashi lifinyelela amanani asabekayo; ibhaluni likhukhumele isikhathi eside ngomoya, futhi washeshe wafinyelela esimweni esandulela ukushaya okukhulu, okubhubhisayo nokuzumayo. Izinkumbi zezivakashi ezivela emazweni ahlukene aseYurophu, kuhlangene nomkhuba ongajwayelekile wabantu bendawo - ukulengisa izithombe zezihlobo ezingasekho eminyango engaphambili yemizi yabo. Kodwa-ke, abantu abavela eBansko nabo banomusa nobungane, ngokuvamile, obudlula isimo se-photonecropolis. Ngaphezu kwalokho, ngithande kakhulu ukuthi kwenye indawo yokudlela yasendaweni enezinto zokupheka zikazwelonke, ngemuva kwesenzo sokudla i-shank enkulu yenyama, ngilethwe i-akhawunti ngayibethela endaweni yokubeka ekhethekile enomthelela omangalisayo wommese omkhulu. Yize ukwenza okufanayo ngemali akunikiwe.
Manje mayelana nekhasino. EBansko ngokungagwegwesi badabukile. Ukuze uthole izimpawu ezethembisayo kufihlwe amahholo ajwayelekile agcwele intuthu yemishini yama-slot.Ngaphezu kwalokho, ngisho nokukhethwa kwezindawo ezifanayo kuzo kushiya kungathandeki. Ngikhumbula izindawo ezimbili, enye yayisehhotela iVihren, kanti enye ngokuziqhenya ibizwa ngeBlitz. Ngendlela, kuzo zonke izikhungo zokugembula eBansko wayebukeka ehlonipheke kakhulu, kusuka kwabanye kwakuhlukaniswa ngabasebenzi abahle nokuba khona kwe-roulette kagesi. Umphathi wendawo wayekhuluma kahle isiRashiya. Uthe eBulgaria kunekhasino ejwayelekile eSofia naseVarna.
Angikafiki eVarna, kepha ngike ngaya eSofia. Ekuqaleni ngangisePlovdiv. Izinto ezibalulekile, umsebenzi nezinye izimo. Kepha ngaba nenhlanhla yokuba nosuku lwamahhala. Kwahlala kuphela ukunquma ukuthi uzofika kanjani enhlokodolobha yaseBulgaria. Ngangizophuza, ngakho-ke kwakuphikiswa ukuthatha imoto eqashisayo, uhambo ebhasini nalo lwabonakala luyinjabulo engabazisayo. Kodwa ingane yase-Ukraine egama linguTaras yangisiza. Uhlale iminyaka engu-10 eBulgaria futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, wenza ibhizinisi lapha. UTaras wangazisa kuVolodya, owayevela eSaratov eshisayo. Kuleli lizwe eliseningizimu, umfana wathola ikhaya lesibili. Ngokuvamile, wavuma ukungithatha ngemali engenangqondo. Endleleni, uVolodya wavuma ukuthi wayengakaze aye eSofia noma ekhasino, ngakho-ke lolu hambo luyamthakazelisa njengami.
Safika enhlokodolobha yaseBulgaria, isikhathi sasincane, kepha ngangifuna ukuba nesikhathi sokwenza. Ngenxa yesimilo esifanele, ngibonile izindawo eziningi ezikhangayo ezibalulekile, engizokutshela kabanzi ngokunye okuthunyelwe, kusihlwa ngiye ekhasino. Ngikwazile ukuhambela izindawo ezintathu: Amakhosazana, iViva neLondon.
IPrincess Casino itholakala eRodina Hotel. Isikhungo esifanelekile: isethi ejwayelekile ye-roulette, i-poker ne-blackjack - amatafula ayi-9 kuphela. Ukubheja kungenziwa ngamadola, ama-euro kanye neva yendawo. Ama-chip avunyelwe ukuthengwa ngqo etafuleni. IPrincess yayingeyimbi, kepha isikhathi sasihamba, futhi ngangifuna ukubona okuningi.
Owesibili emgqeni wokuvakashelwa kwakuyikhasino laseViva. Kuwo, bonke abathengisi bangamantombazane agqoke izingubo ezinhle eziluhlaza. Ingxenye ephawuleka ikakhulukazi yezingubo i-decollete ejulile, okuthi, yize iphazamisa umdlalo, kepha inikeza injabulo yobuhle. Kule khasino bekukhona abantu abaningi kakhulu, abenele bobabili basekhaya nabangaphandle. Mina noVolodya sikwazile ukuthola indawo etafuleni le-blackjack elishibhile - abanye bebematasa. Ngakho-ke kwakudingeka ngidlale ezigxotsheni zezingane. Eduze kwethu kuhlezi indoda, ekuqaleni ngayihambisa njengeludoman eshile yaseBulgaria. Sonke lesi sikhathi umdlalo ubusaqhubeka, ubekhipha imibono ethize ngolimi lwakhe. Ingxenye eyinhloko yamazwi akhe angizange ngiyiqonde, ngemuva kokuba uVolodya echazile - kwakungeyona indoda enamahloni, kodwa ubaba wentombazane ye-croupier egqoke ingubo eluhlaza enentamo. Ikakhulu wancenga indodakazi yakhe ukuthi ibuyele eyunivesithi futhi, ikakhulukazi, wayibiza ngesifebe.
Ngesikhathi izandla zewashi sezidlulile phakathi kwamabili, mina noVolodya sase sivele sithuthelekela esikhungweni esilandelayo. Ikhasino lalibizwa ngeLondon, lasibingelela ngezandla ezimhlophe futhi lashiya ukubonakala okuhle kakhulu. ELondon kune-club poker. Kuhlala kubanjwa izinkambo lapha, futhi zisakazwa ku-plasma ehholo elijwayelekile. Ngaphandle kwezikrini zethelevishini ezilengiswe odongeni, ibuye ibe namatafula ayi-13 namanye amabili atholakala endaweni ye-club poker. Kulesi khasino kukhona nehholo le-VIP, kepha akubona bonke abangeniswa lapho. Ngendlela, abasebenzi baseLondon bahle, kepha kuba ngcono kakhulu, bengakhulumi ngesiRashiya, kodwa ngesiNgisi noma ngolunye ulimi. Ulwazi lwezilimi alusizi kuphela ukuqonda, kepha futhi lwandisa nezinga lonke lomsebenzi.
E-Sofia, akhona amanye amakhasino, kepha iningi lawo kungamahholo emishini yokubheja enezimpawu ezikhanyayo ezikhohlisayo. Kusobala ukuthi ukugembula eBulgaria akusona isidlo esikhulu, baya emthwalweni wokuphumula kwendabuko, akekho oza lapha ngokukhethekile ngenxa yamakhasino endawo, akuyona iVegas yakho. Futhi kukhona ukusweleka embonini, kunjalo, kepha umbono wami jikelele wawumuhle impela. Ngaphezu kwalokho, ngiliqedile uhambo lokuya kumakhasino amathathu ngama-pluses, noma engemakhulu, kepha izindleko zomgwaqo nezokuzijabulisa zikhokhwe ngokuphelele. Ngakho-ke, uma uzithola useBulgaria futhi ufuna ukudlala - ungaya ngokuphepha ekhasino lasendaweni, vele ungaziboni izimpawu ezinemibala egqamile.
0.1 Ukugembula eBulgaria
0.2 Ukugembula ku-inthanethi eBulgaria
0.3 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 zesiBulgaria ku-Casino Sites
3 Ukugembula eBulgaria
3.0.1 Imithetho yaseBulgaria ngokugembula - ireferensi yomlando
3.0.3 Amakhasino omhlaba "angaxhunyiwe ku-inthanethi" eBulgaria
3.1 Amakhasino aku-inthanethi eBulgaria - Ungaqala kanjani ukudlala amakhasino aku-inthanethi?
3.1.1 Indawo yeBulgaria kanye nesizinda somlando omfushane
3.1.2 IBulgaria ebalazweni laseYurophu
3.1.3 Ukudla kweSofia
3.1.4 Amaqiniso anentshisekelo ngeBulgaria namaBulgaria
3.2 Mayelana namakhasino aseBulgaria
ama-act uptown akukho diphozithi